I-India imise amaProteas ekuwineni uchungechunge lweT20 - Impempe
I-India imise amaProteas ekuwineni uchungechunge lweT20
June 14, 2022 Impempe.com
INingizimu Afrika iyeke ithuba lokuqeda nge-India ochungechungeni lwemidlalo emihlanu yeT20 ishaywa ngama-run angu-48 okokuqala eDr Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium, ngoLwesibili.
AmaProteas abeye kulo mdlalo ehamba phambili ngo 2-0 kule midlalo emihlanu yeT20. Ukuwina ngoLwesibili bekungasho ukuhamba nalo uchungechunge lwemidlalo emibili kusasele imidlalo emibili.
Kube uChahal owenzele phansi iNingizimu Afrika ethatha amawikhethi amathathu esangenelwe ama-run angu-20 kuphela. AmaProteas iwona awine ithosi akhetha ukushwiba kuqala.
UHarshal Patel naye wenze kahle kakhulu ethatha amawikhethi amane wangenelwa ama-run angu-25.
Isinqumo sokushwiba kuqala asihambanga kahle neze njengoba i-India ibilishaya ngokukhululeke kuma-over ayisithupha okuqala. Iqembu lasekhaya ligcine lenze ama-run angu-179 kuma-over angu-20.
Iphendula iNingizimu Afrika izinto azihambanga kahle zisuka njengoba ibilokhu ilahle amawikhethi. Akekho umdlali obhethe kahle waze wenze ama-run angu-50 nokuyinto eyenze ukuthi amaProteas alokhu esalela emuva kwi-innings yesibili.
Umdlalo wesine weT20 ungoLwesine kanti iNingizimu Afrika isenethuba lokudeqa nge-India uma iwuwina. Uma kuwina i-India kuzosho ukuthi umdlalo wokugcina kuzoshunqa uthuli kuwona njengoba ozowina ezokhala emuke nendebe.
Previous Previous post: UMhango usejahe ukubhakuzisa inethi asize Usuthu luwine izindebe
Next Next post: ‘Yiqiniso, inkinga likhulunywe umuntu ongafanele,’ kusho uDlangalala